iFixit inodambura iyo iPhone 7 Plus uye inoratidza zvakavanzika zvayo kwatiri | IPhone nhau
Ndiyo imwe yenguva dzinotarisirwa kwazvo panotangwa iPhone nyowani: iyo iFixit teardown. Iyo inozivikanwa webhusaiti inogara iine basa rekuparadzanisa maApple terminals kuti atiudze zvakavanzika zvemukati, izvo zvinoshandiswa neApple uye chikonzero cheimwe shanduko idzo kusvika panguva iyoyo dzaive dzisingatsanangurike. Ikozvino kwave kuchinjika kweiyo iPhone 7 Plus, iyo 5,5-inch modhi, uye inoratidzira yemukati ine shanduko zhinji ichienzaniswa neyekare modhi. Bhatiri, haptic mota, kamera ... zvinhu zvakawanda ndezve izvo zvachinja uye isu tinokuudza nezvazvo pazasi.
iFixit inotitaurira kuti iyo yekucheka maitiro yakafanana chaizvo neyekare mamodheru, ine yakasarudzika "Pentalobe" screws, asi zvinoshamisa, inonongedzera kuti kana zvisvinu zvabviswa, kumberi kweiyo iPhone 7 Plus inoparadzaniswa kudivi, saka zvakasiyana zvakaitika mumamodeli apfuura, pamwe nekuda kwekudzivirira kwemvura nyowani iyi nyowani smartphone. Chii chakaitika kuhedhifoni jack? Zvakanaka, kukakavadzana kubviswa kwechinyakare chinobatanidza cheedu mahedhifoni ehupenyu hwese kwasiya nzvimbo yeiyo haptic injini yeiyo iPhone 7, iyo diki chinhu chinoita kuti iyo iPhone vibration kusiyane neyakajairwa uye izvo zvakare zvinotipa isu kunzwa kwekukanya pakudzvanya bhatani rekutanga kana pasina chaiko kufamba. Ichi chingave chiri chimwe chezvikonzero zvekubviswa kwehephonephone jack, kunyangwe chokwadi chekuti kune zvakare inodzivirira epurasitiki munzvimbo iyoyo inonongedzera kurwisa kwemvura, zvakare, sechimwe chezvikonzero zvakakosha. Chidimbu icho chepurasitiki chinoitisa ruzha, zvinoita sekunge chichienda nacho kumakrofoni kana kuti kuchiburitsa kunze kweiyo haptic mota.
Imwe yedata inonyanya kufarira vashandisi ve iPhone ibhatiri rechishandiso chitsva. Apple yakatizivisa mune yayo Keynote hupenyu hwebhatiri kusvika pa1 awa refu muiyo iPhone 7 Plus ichienzaniswa neiyo iPhone 6s Plus. Izvi zvichakonzerwa muchikamu chikuru kune chokwadi chekuti bhatiri reiyo nyowani nyowani ine hukuru hukuru kupfuura iyo yemhando yapfuura, kunyanya 2915mAh ichienzaniswa ne 2750mAh yeiyo 6s Plus. Zvinosara kuti zvionekwe kuti bhatiri rinozvibata sei mukushandisa kwemazuva ese uye kana mamwe maminetsi makumi matanhatu anovimbiswa naApple ari chaiwo. Iyo mbiri kamera, pasina mubvunzo hukuru hukuru hweiyo iPhone 7 Plus uye iyo zvakare inosiyanisa iyo kubva ku4,5-inch modhi, chave chikonzero chekurumbidzwa neIFixit, kuve nechokwadi chekuti "zvinoita kuti kamera ibude ive yakakosha" iyo yatinoyeuka inoita kuti kumashure kweiyo iPhone kusanyatso gara. Mune ino modhi, iyo fungidziro inowanikwa neiyo iPhone yeyawo aruminiyamu mamiriro, zvakare kuti uwane mvura kuramba.
iFixit inosimbisa Samsung's 3GB yeLPDDR4 RAM, uye inobatanidza Mheni yakavakwa zviri nani kupfuura yakatangira, iine kuputira iyo inokwanisa kumira kusvika 50m yemvura, chimwe chinhu chakakwirira kupfuura icho Apple pakutanga chinosimbisa kuti ingori mita imwe chete. Kune humwe humboo kwese kwese kwekushomeka kwemvura, uine zvidimbu zverabha zvinoshanda sekuputira muzvinhu zvakawanda, senge nanoSIM tray. Mukurukuri wepamberi anochinjawo, nekuti izvozvi ine mbiri mishoni: shanda segudzanzwi rwekufona uye gudzanzwi kuti uteerere kumimhanzi kana chero imwe faira yemultimedia padhuze neiyo iri pasi uye nokudaro uwane kekutanga iyo iPhone ine ruzha rwe stereo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » iFixit inodambura iyo iPhone 7 Plus uye inoratidza zvakavanzika zvayo
Ndinovimba haina kusimba senge dzese dzakapfuura, ndinofunga chinhu chikuru kutengesa zvikamu, senge kuratidzwa, kubata nezvimwe.Uye kana dzikatyoka, mvura inonyatsopinda ...
Save2PDF ye iPhone neIpad yemahara kwenguva yakati rebei